Banaadir Post | Voice Of Somalia
Tag Archives: Banaadir Post
DHAGEYSO:-Aqoonyahan Max’ed Xassan “Ciidanka Dowlada Federaalka ah Hoonkoodu Waa Xabad”
Posted on April 19, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Argagax iyo cabsi xad dhaaf ah ayaa haysata ciidamada dowladda federaalka ah ee ka howl gala magaalada Muqdisho. kolka ay koontaroolada ku baarayaan gaadiidka dad weynaha waxay ka baqayan gaariga iyo qofka wataba sida uu sheegayo aqoonyahan Maxamed Xassan oo Muqdisho jooga.
Wuxuu sheegayaa in aqoon darro balaaran sidoo kale haysato oo ay qalabka dadku wataan u qaataan in ay wax yaabo qarxa yihiin. Wuxuu intaas ku daray markii gawaarida ciidamadu wataan ay jidadka marayaan in aanay Hoon yeerin ee ay xabado badan furaan si jidka looga kala cararo kadibna asigoo banaan ay u maraan. sababtaas ayuu ku sheegay in ay ka cabsi qabaan in halkaas loogu gambado dabadeedna wax qarxa lala eegto.
Halkan Ka Dhageyso Aqoon yahan maxamed xasan.lite
DHAGEYSO:-Dowladda Federalka oo naxsan “Amisom Waxay Ka Bixi Rabaan Degmooyin Kale”
Posted on March 26, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Dowladda federalka oo si aad ah uga naxsan tallaabadii ay ciidamada shisheeye uga bexeen qeybo kamid ah gobolka Sh/hoose ayaa xaqiijisay iney jiraan dhul hor oo ay Amisom dooneyso iney ka baxddo.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo degaan ahaan ku ab-tirsada gobolka Sh/hoose kana gaabsaday in la adeegsado magacooda ayaa inoo sheegay in ciidamada shisheeye go’aansadeen iney ka baxaan gobolka.
Mid kamid ah xildhibaanada ayaa yiri’ “labadii bilood ee lasoo dhaafayba waxay Amisom ku mashquulsanaayeen istaraatiijiyadda ay uga bixilahaayeen Sh/hoose, haddana waxay billaabeen in u baxaan qaabkii ay u qorsheysteen”.
Sidoo kale gudoomiyaha Sh/hoose ee dowladda Cabdul-qaadir Maxamad Nuur “Siidii” oo u waramay warbaahinta Mareykanka ayaa sheegay iney ka xun yihiin tallaabada ay ciidamada shisheeye uga bexeen Bariire iyo Aw-dheegle, isagoo ku calaacalay iney xeero iyo fandhaal kala dheceen.
Illaa iyo hadda lama oga duruufaha ciidamada shisheeye ku khasbay iney bixitaan billaabaan, laakin waxay u badan tahay dhiig baxa ku socda iyo arimo siyaasadeen oo isku biirsaday.
FADEEXAD:Tedros Adhanom Wasiirka Arimaha Dibada Ethiopia oo markii ugu horeysay ka Hadlay Gabadh uu kufsaday.
Posted on March 10, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Wasiirka Arrimaha dibada Xukuumada Gumeysiga Ethiopia Tedros Adhanom, ayaa markii ugu horeesay ka hadalay Faraxumeyn uu ku geystay Gabdhyar ka Timid Wadanka Austrilai Asal ahaana ka soojeeda wadanka Ethiopia gaar ahaan Qoomiyada Orimoya.
Faraxumeynta gabadha ayaa waxaa siwayn maalmahan u hadal hayay warbaahinta dawlada Yurub iyo Maraykanka su’aalo ka keenay sida gabadhan da’da yari uu u kufsaday Dr.Tedros Adhanom
hadaba Wasiirka ku sheekga ayaa markii ugu horeysay barta oo ku leeyahayFacebook soo dhigay hadal kooban oo uu ku saabsan qaabka uu wax u dhacay, wuxuuna yidhi”Anigu gabdha waan la kulmay laakiin waxba ku masameynin ee ceebta haleyga daayo”
DHAGEYSO:- Reer Muqdisho “Annagu dowlad ma haysano, niman na iibsanaya iyo gumeysi baa na haysta”
Posted on March 8, 2015 by Voice Of Somalia Standard
iyadoo dowladda federaalka shacabka muqdisho ku eedeynayso in aanay la shaqeyn ayaa hogaamiyaasha bulshadu waxay sheegayaan in aanay dowlad haysan laakiin ay arkeen niman dhiigooda daadinaya kuna gura xabsiyada kadibna iibsada iyo gumeyste.
Nabadoon Warsame iyo Nabadoon Maxamuud oo reer Muqdisho ah ayaa iyagoo u waramayay Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan waxay ku dheeraadeen dhibaatada magaalada ka jirta.
Waxay ku taliyeen in loo baahan yahay in dagaal la isku xoreynayo loo istaago.
Intuu Aabahay Dilay Ayuu Doonayaa Inuu Hooyadey Dumaalo!!
Posted on January 25, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Marka qof walba uu aqriyo cinwaanka maqaalkan waxaa durbadiiba maskaxdiisa kusoo dhacaya qof dhib weyn loo geystay oo aan waxba loo reeban islamarkaana aamusi kari waayay.
Ujeedada qormadan waxay iga tahay qeyllo dhaan kadib markii aan arkay gumeysi aad u daran oo doonaya inuu hantiyo gabi ahaanba dalkeena Soomaaliya.
Inkastoo dadka Soomaaliyeed wada garwaaqsan yihiin in Itoobiya tahay cadawgeena kowaad, ayaa haddana waxaa laga yaabaa in dadka qaar aaney la socon dhibaatada ay maanta inagu hayso.
Arrinta aan ka hadlayo ma ahan ciidamada faraha badan ee ay dalka soo galisay, taas waad ka wada warqabtaan laakin waxaan arkaa labo qodob oo halistooda leh una baahan in laga wada hor tago.
Midda kowaad waxay tahay In Itoobiya gacanta ku dhigtay mid kamid ah hey’adaha ugu muhiimsan dowladda Federalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho, Sidoo kalana xarunta Madaxtooyada ka dhex sameysatay xafiis jaan gooya siyaasadda DF-ka.
Itoobiya waxay gacanta ku heysaa Xeer ilaalinta guud ee dowladda iyadoo xafiiskaasi u dhiibatay Axmad Cali Daahir oo ah nin xilal kasoo qabtay dowladooda siiba dhulka ay gumeysato ee Soomaali galbeed.
Ninkan ayaa waxa uu Muqdisho iyo gobolada ay shisheeyaha joogaan ku dhex leeyahay awood ka badan tan Xassan Sheekh, waxaana tusaale loo soo qaadan karayaa mas’uuliyiin heer wasaaradeed ah oo uu xabsiga u dhaadhiciyay.
Qof ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada oo aanan idan uga heysan inaan magaciisa xigto ayaa ii sheegay in ujeedada ay Itoobiya ula wareegtay xeer ilaalinta ay tahay sidii ay u maamuli lahayd laamaha dowladda oo dhan, weyna ku guuleysatay.
Intaa waxaa dheer oo tan ka halis badan In dowladda Ioobiya ay madaxtooyada ku dhax leedahay xafiis wata magac safaaradeed oo laga hago madaxda dowladda, kaas oo uu hogaamiye ka yahay ninka lagu magacaabo Gabre oo kamid ah saraakiisha loo soo tababaray qabashada Soomaaliya.
Xafiiskan ayaa mararka qaar ka mashquul badan madaxd dowladda, waxaana lagu arkaa wasiirro, xildhibaano, odayaal iyo wadaad xumayaal sandareero iyo mansab ka doonaya amxaarada.
Xaruntan ay Itoobiya ku dhex leedahay madaxtooyada ayaa waxay maamulka Addis-ababa ka gacan siisay sameynta maamul goboleedyo hor leh oo iyada ka amar qaata sida:- kan Kismaayo iyo Baydhabo iyadoo si lamid ah laga hagayo midka hadda la doonayo in laga dhiso gobolada dhexe.
Arrimahan waxay imanayaa xilli Muqdisho iyo gobolada dalka ay dhooban yihiin hooyooyin dhibanayaal ah iyo kumanaan caruur ah oo ay agoonteeyeen ciidankii Xabashida ee sannadkii 2007-dii caasimadda qabsaday. Waxaa wali sii muuqda dhiigga dadkii ay gumaadday iyo raadadka daarihii iyo masaajidii ay burburisay.
Markaan arkay waaqican aan maanta ku nool nahay, waxaan soo xusuustay hadal taariikhi ah oo uu Sh/Maxamad Rishaad Allaah u naxariistee uu ka jeediyay shir looga hadlayay duullaankii Xabashida ee gobolka Gedo 1996-dii.
Sheekha ayaa sheegay in Itoobiya degtay istaraatiijiyad ah in Soomaaliya loo qeybiyo qabaa’illo iyo gobol gobol kadibna la wada hoos geeyo Itoobiya.
Haddaba marka la fiiriyo halista aanu ku jirno ayaa waxaa lagu macneyn karaa nin aabahaa dilay oo doonaya inuu hooyadaa dumaalo. Marka diin ahaan la eegana waa arrin aan bannaaneyn in dad Muslimiin ah u hogtaan gumeysigooda.
Ugu dambeyntii waxaan dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed dal iyo dibadba ugu baaqayaa in ay garawsadaan meesha maanta xaal marayo, ayna garab istaagaan dhallinyarada xaq u dirirka ah ee har iyo habeen hor taagan gumeysiga. Maanta waxaa qormeysa taariikh ee qof walboow ama qabiil walbow ka fakar halka aad ku qormi doonto berri iyo maalinta aakhiro.
W/Q Saxafiga Jaamac Dhoorre.
DHAGEYSO:- Maxay yihiin Ciidanka Gaashaan”ALFA”,Yaa Sameeyay,Maxaa loo sameeyay?
Posted on January 5, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Aqoonyahan Cabdulqaadir Cali Yarow ayaa sawir guud ka bixiyay ciidamada ALFA ama GAASHAAN oo ah magac looga yaqaan Muqdisho,wuxuuna sheegay in Mareykanku u sameystay ciidankan.
Ciidanka Gaashaan ayaa ayaa waxaa gaaray qasaaro xoog badan ka dib markii qarax lala helay.
Aqoonyahanka ayaa intaa ku daray in ciidanka Alfa iyo kuwa lamidka ah ee shisheeye mari doonaan wadada kuwii iyaga uga soo horeeyay Soomaaliya iyo sidoo kale dhabbihii ay qaadeen ciidamadii Mareykanka ee ku duulay Afganistaan.
DHAGEYSO:- GABAYGII KOOFIL IYO SAYID MAXAMED.
Posted on December 25, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Dagaal-ooge caan ahaa oo ay ciidamadii gumaysiga Ingiriisku ku dhaaran jireen oo la odhan jiray Richard Corfield,Soomaaliduse ku naanaystay Koofil oo ay Daraawiishi ku makashay dagaalkii Dulmadoobe ee 1913kii ayuu Sayidku gabaygan ka tiriyey.
Daraawiish oo hore u weerartay beel beelaha Burco iyo agagaarkeeda dega ka mid ah, xoolo badanna kasoo mooroduugtay ayey Koofil iyo ciidan uu watay jidgooyo waxay u dhigeen Dulmadoobe. Dulmadoobe waa buur gabbaad fiican, jidgooyada dagaalkana ku habboon.
Kolkay Daraawiishi suryada Dulmadoobe soo buuxiso dabka saara oo naf iyo maalba wax go’a, wax goosma iyo wax gacanteena soo gala ka dhiga ayuu Koofil amar ku bixiyey.
Bidhii waagaba hoos ayaa la isugu dhigay. Judhiiba waxay ku dhagtay Koofil oo isla goobtii ku nafwaayey. Mar haddii Koofil miimka alifka ku taagay, colkii uu watay wuu kala firdhay, Daraawiishina caymo uma galinee cagta ayey cagta u saareen ilaa ay gacanta ku dhigeen bakhtigii Koofil. Mashaqo weyn oo aan la soo koobi karin ayaa halkaa Ingiriis iyo cawaamkiiba ka raacday, rag badan oo uu Koofil ugu horreeyo ayaana maalintaa xagga naarta u guuray.
Si aan shakiba u galin geerida Koofil, Daraawiishi madiixiisii iyo gacantiisii midig ayey Taleex geeyeen. Sayidku dagaalkaa iyo dilka Koofil ayuu gabaygan caanka ah ka tiriyey. Wuxuu yidhi:
Sayidku intuusan gabaygan marin waxaa gabay warbixin ah oo dagaalku siduu u dhacay iyo sidii Ingiriis iyo cawaamkiiba ay caalsaaraha uga qaateen ku saabsan tiriyey Ismaacil Mire. Anagoo Taleex naal gabayga ka kaca weeye.
Dagaalkaas waqtigaas i jiray oo kale ayaa maanta ka jita gayiga Soomaaliyeed,qof kasta oo qeyb ka noqdaana taariikhda ayaa xusi doontaa,dhinaca oo doono ha ku jiree,xumaan iyo simaan,xaq iyo Baadil.
Waxaa ka dhacday degmada Yaaqshiin arin aad looga naxo markii la sumeeyay ceelka biyaha siiya degmadaas iyo degmooyinka ku wareegsan,ceelkaas oo aad looga yaqaan xafadahaas,waa Cee4laka Ramadaan kaasoo dad badana ay u waxyooloobeen.
ku dhawaad 50 ruux ayaa la soo sheegayaa inay u dhinteen biyahaasi sumeyssan.
Tiro kale oo dhan 150 ruux ayaa la ildaran kuwaasoo shuban ka qaaday biyaha ay cabeen waxaana lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka.
Waxaana soo baxday in Turkido ka danbeyso in Ceelasha la sumeeyo,waxaana la ogaaday in sumayn rabo ceelasha loogu cabis badan yahay magaalada Muqdisho.
Dhageyso Hooyo Soomaaliyeed.
DHAGEYSO:-Turkiga oo ku naaxay Dhaqaalaha Soomaalida.
Posted on December 7, 2014 by Voice Of Somalia Standard
lacag malaayiin doolar ah ayaa Turkiga ka soo gasha dekedda Magaalada Muqdisho taasoo diyaarado lagu qaado si magaalooyinka Turkiga loo geeyo.
Ganacsatada dekadda wax kala soo degta ayaa sheegeysa in qarashkii ay waayadii hore bixi jireen mid ka badan ay iminka dhiibaan.
waxay tilmaamayaan in dowladda federaalka ah inkastoo turkigu lacagta uu qaado ay la qeybsato hadana ay jiraan xafiisyo kale oo ay lacago ku qaado oo dekedda gudaheeda ku yaal.
Wasiiradii C/weli Sheekh oo laga mamnuucay inay Muqdisho ka baxaan Ilaa …!
Posted on December 6, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Warqad maanta gelinkii dambe kasoo baxday xafiiska kuwa loogu yeero Xeer illaaliyaha Guud iyo kan Hanti Dhawrka Guud ayaa waxaa lagu sheegey in dhamaan xubnaha ka tirsan golaha wasiirada aysan da dibada u dhoofin karin illaa ay ka wareejinayaan xilka ay hayaan.
Warqadda ayaa waxaa sidoo kale ku xusan in marka xilka la wareejinayo ay qasab tahay in ay goobjoog ahaadaan Xeer Illaaliyaha Guud, Hanti Dhawrka Guud iyo Garyaqaanka Guud.
Waxa ay intaasi warqadda ku dareysaa in marka intaasi dhamaato kadib haddii ay doonaan in ay dalka banaanka uga safraan, in ay soo wargaliyaan sedexdaasi xafiis.
Waxaa halkani ka muuqan kara saansaan ah in ay suurogal tahay in dambiyo lunsi hanta dadweyne lagu soo oogi karo qaarkood.